Maxaa ku soo kordhay xariga weriyihii gaarka ee Duqii hore ee Muqdisho AUN Eng. Yariisow? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ku soo kordhay xariga weriyihii gaarka ee Duqii hore ee Muqdisho...
Maxaa ku soo kordhay xariga weriyihii gaarka ee Duqii hore ee Muqdisho AUN Eng. Yariisow?
Weriyihii gaarka Duqii hore ee Muqdisho, AUN Eng. Yariisow
Weriyihii gaarka Duqii hore ee Muqdisho, AUN Eng. Yariisow oo weli Muqdisho ku xiran.
Muqdisho (Halqaran.com) – Muddo Afar cisho ah waxaa Magaalada Muqdisho ku xiran Weriyihii gaarka ahaay ee Duqii Muqdisho Axmed Nuur Mohamed oo ciidamada Booliska ay xireen.
Weriyaha ayaa la soo xiray Maalintii Khamiistii todobaadkii la soo dhaafay, waxaana illaa iminka uu ku xiran yahay Xarunta dambi baarista Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in sababaha loo xiray Axmed Nuur ay tahay inuu gacanta ku haayay Documentiyo uu si shaqsi ah u leeyahay Duqii Muqdisho Allaha u naxariistee Eng. Yariisow, lacago iyo barihii Social mediyaha uu ka isticmaali jiray Yariisow.
Axmed Nuur ayaa go,aansaday inuu ku wareejiyo dhamaan waxyaabihii uu u haayay yariisow ehelada Marxuumka, waxaana la sheegay dowladda Soomaaliya inay doonayso in lagu wareejiyo dhammaan agabkaasi.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Axmed nuur uu diiday dowladda inuu ku wareejiyo waxyaabihii Yariisow uu u haayay, uuna doonaayay inuu ku wareejiyo ehelada Marxuumka.
Axmed Nuur Maxamed oo ah nin dhalinyaro fir fircoon ayaanan illaa hadda jirin cid si toos ah uga hadashay arrinta uu u xiran yahay, marka laga soo tago afar cisho maxkamad la, aan inuu isaga xiran yahay.
Duqii hore Muqdisho
weli ku xiran Muqdisho